You are here: Home / Advertise With Us / G Suite
ဂူဂယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းသုံး အီးမေးလ်
မိမိကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း နဲ့ Google Mail ကိုအသုံးပြုလိုပါသလား ? google ရဲ့ re-seller ​နှုန်းနဲ့ ဈေးနှုန်း သက်သက်သာသာ သုံးလိုပါသလား ?
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Google ရဲ့ professional email ကို သုံးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
* Business email addresses ([email protected])
* Video and voice calls
* Integrated online calendars
* 30GB of online storage for file syncing and sharing
* Online text documents, spreadsheets and slides
* Easy to create project sites
* Security and admin controls
* 24/7 phone and email support by google team
Call Now : 01 - 525 380
အခမဲ့ Gmail ကို မည်သူမဆိုအလွယ်တကူ account ဖွင့်လို့ရနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအလွယ်တကူ လူတိုင်းရတဲ့ Gmail ကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ သုံးနေတယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် ဖောက်သယ်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုလျော့ကျခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ ခိုင်မာမှု၊ တရားဝင်မှုတွေကို သံသယဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံအရ အွန်လိုင်းကနေပြီး credit နဲ့ ငွေချေပြီးချိန်မှာ ဟိုတယ် Voucher ကို အခမဲ့ အီးမေးလ် သုံးပြီး ပြန်လည် ပေးပို့မိလို့ ဝယ်ယူသူမှ ဝယ်ယူထားမှုကို ချက်ခြင်းဖျက်သိမ်းပြီး refund ပြန်တောင်းကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ professional ကျကျ အလုပ်လုပ်နေရမယ့် အချိန်မှာ လူတိုင်းအလွယ်တစ်ကူရတဲ့ အခမဲ့ gmail ကို professional မကျ သုံးစွဲနေလို့ လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုပျက်သွားလို့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ internet ပေါ်မှာ ကိုယ့် လုပ်ငန်းကို ရှာတွေပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ form mail ကနေတဆင့် ဆက်သွယ်လာပြီးခါမှ အခမဲ့ gmail နဲ့ အကြောင်းပြန်မိလို့ ဟိုဘက်က ထပ်မံမဆက်သွယ်တော့တာတွေ ဖြစ်လာကြပါပြီ။
ငွေကြေးကုန်ကျမှုသက်သာခြင်း / ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း
Google ၏နည်းပညာကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုထားသော စာပို့စနစ်များပါဝင်သောကြောင့် သီးသန့် hardware (သို့) software များ မလိုအပ်ပဲ၊ လွယ်လင့်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်ကုန်သာသက်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဆင်ပြေမှုများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ Email အသုံးပြုသူများမှလည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်သော Microsoft Outlook ကဲ့သို့သော interface များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ Email, Contacts and Calendar များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Data သိမ်းရန် နေရာပိုမိုရရှိခြင်း
အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်အရေးကြီး message များသိမ်းရန် 30GB နေရာရထားပြီး Google Search အသုံးပြုကာ လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်သော message များကို မြန်ဆန်စွာရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ Gmail ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အနည်းဆုံးအချိန်သုံးစွဲကာ အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ message များ စနစ်တကျစီစဉ်ထားရှိခြင်း၊ message မှာ label များတပ်ဆင်ခြင်း၊ message များကို မြန်ဆန်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ spam mail များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် ထိရောက်မှု မြင့်မားစွာရရှိနိုင်သည်။
လူကြီးမင်းတို့ခရီးသွားနေစဉ် အချိန်မှာပင် Google apps ကို လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုကာ မိမိတို့ရုံးခန်းမှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်စရာ မလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ BlackBerry, iPhone, Windows Mobile နှင့် Android ဖုန်းများကို Google Apps ၏ support မှအချိန်နေရာမရွေး၊ အပိုကြေးပေးဆောင်စရာမလိုပဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။
၉၉.၉% ရာနှုန်းပြည့် ချိတ်ဆက်မှုရနိုင်ခြင်း
99.9% ထိ မည်သည့်အနှောက်အယှက်၊ ကြန့်ကြာမှုမရှိ အချိန်ပြည့် အသုံးပြုနိုင်မည်ကို Google Apps အသုံးပြုသူများကို အာမခံနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွင်ကျယ်မှုမရှိခြင်း၊ system downtime အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။ စိတ်ချလုံခြုံသည့် data center များတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ Gmail, Google Calendar, Google Docs နှင့် Google Sites များကို အမြဲတစေ ကူးယူသိမ်းထားသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို Google ထံယုံကြည်စွာ အပ်နှံထားသည့်အတွက် ၎င်းသတင်းအချက် အလက်များသည် သေချာပေါက်လုံခြုံမှုရှိနေသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ အရေးကြီးအချက်လက်များကို Google ၏ security team နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည်။ အရေးကြီး data များကို ခိုင်မာသော လုံခြုံမှုစနစ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုကို Google နှင့် အခြားသုံးစွဲသူများစွာက ယုံကြည်စွာအပ်နှံထားပါသည်။